Indonesia in Focus: Calaamadaha soo socda ee Maalinta Qiyaame.
Calaamadaha soo socda ee Maalinta Qiyaame.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (329)
(Qaybta saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan), Depok, West Java, Indonesia, August 2, 2015, 19:31 pm)
Filimka Armageddoon, bilowday xiddigaha movie Bruce Wllis ee Hollywood sheegi lahaa sheekada ku saabsan Daqsi (oo ay) a kastana Falag buu jirka (naasohoodu) dhinaca dhulka.
In filimka si technology iyo awoodda aadanaha mahad, socon kartaa (memonotor) ayaa noqonaya saxiixii oo meel bannaan oo walxaha si ay dhulka.
Markaas gaari cir dikirimlah in gani doonaa Meteor hubka nuclear ka hor dhulka gaaray. Laakiin waxay ahayd oo kaliya Sheeko la cirfiid (sheekooyin) ee injineeriyada aadanaha taas oo aan marnaba ka dhacay.
Laakiin dhab ahaantii meel ka baxsan yihiin balaayiin Falag (naasohoodu kale Anta) in waddaa idiinna ku haboon.
Aayaddan Al Quraanka Al Hajj 65 Ilaah aqoon ay u leeyihiin (sunatullah) kaas oo nidaaminaya oo xajiya meel go'an walxaha falagiisuu, si noqnoqosho leh oo maraya si joogto ah, isagoo Ilaah la jira gaashaan sidoo kale Earth Sciences dahaarka leh (jawi dhulka ee ) si ay wax kasta oo meel ka baxsan anggkasa in aan la gali Dhulka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii Ilaah waa weydaan, sida xaqiiqada ah naasohoodu in baabbi'in doonaa dhulka, iyo waxa ku jira oo dhan ee dhulka, oo ay ku jiraan buurta u qadimeen doonaa Carro, marka Eebe ku amartay burburinta dhulka ama in loo yaqaan Quraanka sida soo socda oo ah Maalinta Qiyaame.
Waxa kaliya in Ilaah keliya ayaa ogani markii wakhtigii la waxay u dhowaanin. Nabiga ayaa loo sheegay oo keliya by Gabriel Angel calaamadaha keliya, maxaa yeelay, Gabriel loo sheegay, Ilaah ma markii iman doonaan Maalinta Qiyaame.
Nabiga ayaa mar sheegay in Qiyaamaha dhowayd by muujinaya labada farood. Laakiin haddii aynu fasiraan labada farood in maalin maalmaha ka mid Eebe agtiisa ku yahay Kun sano aadanaha, taasoo la micno ah 2,000 oo sano ka dib markii Muhammad muujiyeen labada farood. Laakiin sida xaqiiqada ah oo kaliya Ilaah keliya ogyahay, waa kuwo si cad Maalinta Qiyaame in marka ay timaado albaabka toobad (dambidhaafna waydiista) uu xiran yahay, ka dibna waxaanu isla markiiba toobad, si joogto ah loo fuliyo tiirarka Islaamka iyo khusu, dad badan xuska iyo dambidhaaf waydiista, (dambidhaafna waydiista) ,
Al Quraanka Surah Al-Hajj aayadda 65:
(22:65) Miyaadan arkayn sida Eebe idiin Sakhiray waxa ku sugan Dhulka dhammaan si, iyo Markabka Socda ee badda ku jira iyadoo ku socota amarkiisa, 113 iyo kii qabtaan (walxo) Cirku aan ku dhacdo Dhulka Idinka Eebe mooyee, Idankiisa? , Eebana waa raxmad, iyo naxariis Dadka.
Calaamadaha kale ayaa imaatinka Maalinta Qiyaame,
Calaamadaha KIAMAT isku xigxiga
Waxaan aan la heli qawl ah in si cad u sharxayaa amarka badan oo calaamadaha Mudan by xaaladdu. Wax walba waxaa lagu qeexay in xadiiska kala duwan oo keliya oo aan si, maxaa yeelay amarka Xusuuso waxa ku jira oo dhan ma tilmaamayso isku xigxiga ee dhacdada. Odhaahda in waxa la isticmaalayo isku dardarsan oo Wawu, halka warqad ma ku jira macnaha amarka.
Waxaa jira qoraalo dhowr ah oo si cad u jabisay si ay u soo sheegnay in qoraallada kale.
Si taasi ay u noqon dheeraad ah oo cad, ka dibna waxaan ku magacaabi doonaa dhowr tusaale sheegay xadiisyada qaar ka mid ah in la xuso calaamooyin waaweyn Qiyaame in gebi ahaan ama qayb.
1. Imam Muslim rahimahullah Qisadii ee Hudhayfah ibn al-Ghifari Acid Radi anhu, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu 'wa noo yimid. Inkasta oo aan la hadleynaa, ka dibna waxa uu weydiiyay:
'Maxay yihiin hadalladan aad isku haysaan?
Waxay ku jawaabay, ". Waxaan ka hadleynay Qiyaamaha 'Waxa uu yiri:
"Run ahaantii, waxa uu (Qiyaamaha) ma dhici doona ilaa aad ka aragto toban calaamadaha ka hor."
Markaasuu ku xusan qiiqa, NNKH ka, bahalka, qorrax ka soo baxna xagga galbeed, hoos u dhaca Nabiga 'Isa ibn Maryam, Ya'-JUJ iyo Ma'-JUJ, iyo saddex khasf (hafashada dhulka gali); khasf bari, khasf galbeed, iyo khasf ee Jasiirada Carabta, iyo kan ugu dambeeya waa dab ka soo baxay oo Yemen in dadka halka ay isugu yimaadaan. "
Imam Muslim Qisadii rahimahullah this xadiiska ee Hudzaifah bin Acid la ereyo kale, kuwaas oo:
"Run ahaantii Qiyaamaha ma dhici karaa ilaa ay jiraan toban calaamadaha (ka hor): khasf bari, khasf galbeed, khasf ee Jasiirada Carabta, qiiqa, NNKH, oo dugaagga dhulka, Ya'-JUJ iyo Ma'-JUJ, qorrax ka soo baxna xagga galbeed, iyo olol ka soo baxay yaamayska 'Eden taas oo keeni ragga. "
"Markaasuu hoos u tobnaad ee 'Isa ibn Maryam." 
Waa xadiis Qisadii ka Saaxiibkii leh laba haya- (tifaftirka) kala duwan oo ku saabsan amarka calaamooyin waaweyn Qiyaame.
2. rahimahullah Imam Muslim Qisadii Abuu Hureyrah Radi anhu, in Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
"Aad dhaqso Zakada (ka hor inta uusan soo socda) lix waxyaalood:. Qorraxda oo soo Muuqata xagga galbeed, qiiqa, NNKH ka, bahalka, gaar ah wax aad guys (Geeridu), ama dhibaato guud (Maalinta Qiyaame)" 
Imam Muslim Qisadii rahimahullah xadiiska ah ee Abuu Hureyrah anhu la ereyo kale:
"Aad dhaqso Zakada (ka hor inta uusan soo socda) lix waxyaalood:. Ka gees ah, qiiqa, oo dugaagga dhulka, qorraxdu soo baxdo xagga galbeed, dhibaato guud (Maalinta Qiyaame), iyo wax gaar ah aad (dhimashada) ee" 
Waxay ahayd mid ka mid xadiiska Qisadii ka Saaxiibkii leh laba tifaftirayaasha kala duwan si ay ugu sugan calaamooyin waaweyn ee Qiyaamaha sidoo kale in la isticmaalo waraaqaha athaf, halkaas oo taariikhda adeegsiga ugu horreeya (أو), halka qaar kalena ay u isticmaalaan (و), iyo laba ma yeeleen muujinaysaa xigaan.
Taas waxaa laga yaabaa in aan ogaado waa qaybta uu isku xigxiga ee sumadda marka la eego bixitaanka in qayb ka dib kale ah, iyadoo ay jirto taariikhda qaar ka mid ah ay yihiin, sida ku cad xadiiska ah-Nawwas bin Sam'an Radi anhu, sida markii dambe lagu sharxay doonaa insyaa imtithaal. Xusay waxaa inta badan calaamada taxanahooda ku saleysan dhacdo. Ugu horeysay In xusuusto in la sii daayo NNKH dadka, ka dibna hoos u dhaca Nabiga 'Isa Alaihissallam in ay dilaan isaga, ka dib markii la sii daayo Ya'-JUJ iyo Ma'-JUJ waqtiga Nabiga' Isa Alaihissallam, iyo baryadii in iyaga la baabbi'iyo sheegaye.
Sidoo kale, waxaa jira ugu badnaan taariikh in uu yahay calaamad hore ee this, halka mid ka mid ah la soo dhaafay waa tan. Si kastaba ha ahaatee, isaga oo sida runta ah ma jiro wax farqi ah oo ra'yi ka mid ah culimada oo ku saabsan calaamada hore u muuqday, oo doodan ayaa ku jirtay tan iyo wakhtigii anhum Ehelu Radi ah. Imaam Axmed iyo Muslim Qisadii Abu رحمهما الله  Zur'ah, ayuu yiri, "Waxaa jira saddex qof oo ka mid ah Muslimiinta oo ku fadhiistay Marwan bin Hakam ee Madiina, waxay ka maqli Qisadii xadiiska ku saabsan calaamadaha (Qiyaame) in marka hore ay Calaamo waa dheecaan ka mid ah ka gees ah. Markaas 'Abdullah bin' Amr  rahimahullah yiri, "Marwan waxba kuma uu hadlin (in lagu qabto), waxaan xafiday ka Nabiga sallallaahu 'wa xadiis taas oo aan marnaba intaas ka dib la illoobay, waxaan maqlay Nabiga sallallaahu' wa Waxa uu yiri:
"Run ahaantii sumadda (Qiyaame) oo hore u soo baxay waxa ay aheyd qorrax ka soo baxdo xagga galbeed, markaas baxdo xayawaanka (dhulka) si aadanuhu waqtiga Duha. Oo waxaa meel kasta oo u dhaxeeya baxay ugu horeysay, ka dibna dadka kale ee la socday mustaqbalka dhow. "
Waa tifatirayaasha taariikhda Muslim.
Iyadoo Imaam Axmed siiyaan rahimahullah dheeraad ah ee qorkiisa uu, "'Abdullah ayaa sheegay in xoogga uu ku akhristaan ​​buugaag dhowr ah' Waxaan aaminsanahay in markii ugu horeysay ka soo baxay waa qorrax ka soo baxa xagga galbeed. '" 
Run, rahimahullah al-Haafiz Ibn Xajar isu geeyo (oo uu sharaxayaa taariikhda) in NNKH waa markii ugu horeysay ee sii daayo iyo (taariikh kuu sharraxaayo) in qorraxdu soo baxdo xagga galbeed aheyd markii ugu horeysay, wuxuu yidhi, "Fekerka oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan ee taariikhda oo dhan in NNKH sii daayo waa calaamada hore oo wayn oo u ishaaray isbedel ah ee xaaladda guud ee dhulka dushiisa ah, waxa ay ku dhamaatay iyada oo dhimashada Nabiga 'Isa Alaihissallam. Inkasta oo qorraxdu soo baxdo xagga galbeed waa calaamad u tahay in ishaaray isbedelka ugu horeeyay dabiiciga ah (ka kooban ee habka tamarta qoraxda), waxay ku dhammaanaysaa imaanshiyaha Qiyaamaha, waxaana qabaa in la sii daayo xayawaan waaweyn (dhulka) oo ka dhacay maalintaas oo ay qorraxdu soo baxdo xagga galbeed. "
Markaasuu wuxuu ku yidhi, "Wisdom waxa ku jira in marka qorraxdu soo baxdo xagga galbeed, albaabka toobad xidhay, Iyo xayawaan waaweyn baxay. Kuwani xayawaan waaweyn doonayey in lagu mamanuuco Mu'min ah iyo gaal, lagu dhamaystiro ee goolka ku dhow albaabka toobadda, oo ay calaamada hore in ishaaray abuuritaanka Qiyaame waa dab wax ururiya aadanaha. "
Sida al-Haafiz Ibn Kathir helay qalaad sii daayo xayawaan waaweyn waa calaamad ka mid ah Qiyaamaha horeeyay ee koob weyn ka dhicin dhulka (dago), sababta oo ah xayawaanka ka hadleynaa in dadka iyo in la kala saaro Mu'min ah iyo gaal waxaa wax menyelisihi caadooyinka.
Iyo intaan qorraxda gabbaldhac ka soo baxaysa, ka dibna waxa aad u cad oo waa calaamad u ah meel hore oo cirka Gaalku Qiyaamada.
Sida muuqaalka ah NNKH, hoos u dhaca Nabiga 'Isa Alaihissallam oo Samada ka yimid, oo la sii daayo Ya'-JUJ iyo Ma'-JUJ, inkastoo ay ahaayeen ka hor inta qorraxdu soo baxdo ka horreeyey oo galbeedka ku dhalashada xoolaha sababtoo ah dhammaan ay aadanaha, ay sidoo kale goobjoog ka mid ah iyaga la, aan wax la yaab leh. Marka la barbardhigo sii daayo xoolaha iyo kicidda qorraxda xagga galbeed, ka dibna dhan ah, arrintaasi waa wax la yaab leh. 
Waxa ay u muuqataa in ra'yiga la iskuma haleyn karo waa siday maleeyeen ay hayaan Ibn Xajar, sababta oo ah in la sii daayo NNKH xaaladda sida Dad aan calaamad u ahayd Qiyaamaha, taas oo ka dhigaysa in ay calaamad u ah ee Qiyaamaha waa xaaladda oo aadane leh awood uu ku amri samada soo dejiyo roob, roob ku soo degtay , oo ku amartay dhulka si ay u koraan geedaha, dhulka ahayd i-beerida dhirta. Waxa uu leeyahay awoodda badan oo aad u fiican, sida lagu sharxay doonaa dooda ee NNKH ka.
Markaas NNKH muhiimad waa calaamada hore ugu weyn ee Qiyaamaha ka dhaca dhulka ku jira oo ka mid ah caadiga ah.
Ath-Thaibi rahimahullah  ayaa sheegay, "Waxyaabihii aan caadi ahayn in ay yihiin calaamadaha Qiyaamaha, oo calaamad u ah Qiyaamaha u dhow, ama calaamad Qiyaame soo aaddan. Kan koowaad waa NNKH, hoos u dhaca Nabiga 'Isa, Ya'-JUJ Ma'-JUJ, iyo hafashada dhulka galay. Qaybta labaad waa qiiq, ay qorraxda gabbaldhac ka soo baxaysa, xoolaha iyo bixidda aadanaha dab ururiyaan. "
Waxaa si ee u dhexeeya hal group calaamadaha Qiyaamaha kooxaha kale oo aan calaamad kasta oo isku dayaya inay kala soocaan kuwa ka yar laba kooxood, inkastoo ay u muuqataa inoo in Ath-Thaibi ku dooday u xigxiga Qiyaame sida ay uu ku soo sheegnay in koox kasta, sababta oo ah horyaalka oo micnaheedu noqday wuxuu pegang- waa qayb fiican si taxadar leh mar kale. Maxaa yeelay, haddii qaybta hore oo muujinaya Qiyaame dhow ayaa ka soo baxay, ka dibna u toosin kari lahaa qof kasta oo Banii'aadan si ay u toobad keenaan oo waxaan ku noqon Eebahood, kuwaas oo horey ayaa waxba kuma kala duwana Mu'min ah iyo khiyaamo. Calaamadaha oo uu xusay in horyaalka heerka koowaad, waxaannu sheegay in dhamaan amarka iyadoo la raacayo dhacdo, ay weheliyaan hafashada dhulka ka galay, markaas waxaa haboon isaga.
Sida haddii qaybta labaad ayaa u soo muuqday oo micnaheedu noqday muujinaysaa Kiamat- uu yimid, ka dibna sida xaqiiqada ah dadku ay kala duwanaayeen inta u dhaxaysa Mu'miniinta iyo Gaalada, sida markii dambe lagu sharxay in marka u kaca ee qiiqa ku dhufatey Muslin kasta, ka dibna waxay ku jiraan xaalad ah sida hargabka, halka gaalada sicir neefsado qiiqa ah. Markaas qorraxdu soo baxdo xagga galbeed, kadibna la xiro albaabka toobadda, si qof iimaanka hore jaahilka aan joogay oo dhan waxtar leh, iyo sidoo kale qof toobad. Ka dib ayay kuwa aan dugaagga weyn in takoori doono dadkuba, si aan Yuhuudda ahayn waxay noqon kartaa distinguished ka Mu'min ah, sababta oo ah xayawaanka siinayaa mu'miniinta calaamo ayaa sidoo kale ku siin tilmaan u ah (kale) Gaalada, sida lagu sharxay doonaa. Iyo dhamaadka waxaa dhamaan waa soo bixitaanka dab taas oo horseeday in aadanuhu.
Ula kac ah inaynu sheegeynaa ku calaamooyin waaweyn Qiyaame si ku xusan by Ath-Thaibi ah; tan iyo fekerkiisa ku aadan in -Sida goobtu ay badbaadiyo dhow si dhab ah, Eebana waa ogyahay.
Oo waxyaalahaas ka hor sheegay calaamadaha waaweyn in toban kuwaas, waxaan ka hadli doonaa ka hor ku saabsan al-Mahdi, wixii uu markii hore calaamadahaan muuqday. Wuxuuna kula biiray Mu'miniinta inay dilaan NNKH, ka dibna u soo degay Nabiga 'Isa Alaihissallam, oo waxaan ku tukaday iyada ka dambeeya, sida lagu sharxay doonaa, Hadduu Allah.
BERANGKAINYA CALAAMADAHA bixitaanka MAALINTII UGU DAMBAYSAY EE
Haddii Qiyaamada waa calaamada hore oo waaweyn ayaa u muuqday, markaas calaamadaha kale ee ka soo bixi doonaan horraysiinta sida xabbad luul ah oo taxane ah, oo midba kan kale ka dib.
Rahimahullah Ath-Thabrani tebinaysa kitaabkii al-Ausath Abuu Hureyrah Radi anhu, ka Nabiga sallallaahu 'wa, ayuu yidhi:
"Muuqashada ka mid ah calaamadaha (Qiyaame) qayb ahaan raaci kale ah, Raacsiinay Qarkood Qaar aad moodo Jawhar on xarig ah." 
Markaasuu al-Imaam Axmed Qisadii ka Cabdullaah ibn Camar Radi anhuma, ayuu yiri, "Nebigu sallallaahu 'wa yiri:
"Calaamadaha (Qiyaamaha) Jawhar yihiin Hashii on dunta, haddii dunta laga gooyay, markaas qayb ahaan dadka kale raaci doonaan." 
Our badbaadinta -wallaahu a'lam- waxaa loogu tala galay calaamooyin halkan waxaa ugu sugan calaamo weyn ee Qiyaamaha, maxaa yeelay Zahir oo isugu jira axaaddiith tilmaamaya Stadium labada dhinac iyo soo bixitaanka calaamadahaan ka mid ah la masaafo aad u dhow.
Tani waxaa xaqiijiyay macluumaadka maray on amarka calaamooyin waaweyn Qiyaame, halkaas oo inta badan xadiiska uu sheegayaa in calaamadda se-qayb ka mid ah ay u muuqataa mararka qaarkood in isu dhaw yihiin. Calaamadda ugu horeysay weyn ee Qiyaamaha ka dib muuqaalka kore ee Mahdi waa la sii daayo ka gees ah, ka dibna hoos u dhaca 'Isa Alaihissallam inuu dilo isaga, markaas imaanshaha Ya'-JUJ Ma'-JUJ, iyo baryada Nabiga' Isa Alaihissallam halaagoodii, ugu danbeyn Ilaah iyaga u baabbi'in, Nebigu wuxuu soo socda 'Isa Alaihissallam yiri:
"Sidaas ee u dhexeeya in shaaca ka qaaday ee Eebahay baan ku igu, waa in (Qiyaamaha) meel qaataan haddii ay sidaas tahay. Runtii Gaalku Qiyaamada waa sida qof dumar ah oo uur leh ayaa kaamil ah (uurka leh), halka aanu qoyskiisa ma ay yaqaaniin marka ay la yaabay dhalashada, dad badan oo habeenkii maalmood ama maalintii? "
Waa arrin aad u dhow qawl Qiyaamaha, tan iyo dhimashada Nabiga 'Isa Alaihissallam iyo apocalypse waxaa ugu sugan calaamooyin qaar ka mid ah Qiyaamaha waaweyn, sida qorrax ka soo baxna xagga galbeed, soo bixitaanka xoolaha oo waaweyn, qiiq, dab iyo siidaynta kulan aadanaha. Calaamadaha Qiyaamaha dhacdaa waqti aad u gaaban ka hor la sameeyo Qiyaame. Sawirka sida amarka ka go'naato Bannaankii, Eebana waa ogyahay.
Waana inaan si aad u hesho wax cadeeya waxa aan soo sheegnay. Al-Haafiz Ibn Xajar rahimahullah yiri, "Waxaa la soo go'an in calaamooyin waaweyn Qiyaame sida dunta oo kale, haddii jejebiyey, markaas oo ganac waxaa ku dhici doona. Xadiiska Tani Ahmad tilmaamay in taariikhda. "
Posted by needsjobslowongankerja at 7:26 AM